१६ नं. वडाले धौरी गाउँमा विजुली बाल्यो, लक्ष्मीपुजासंगै भब्य उद्घाटन | Purnapusti Khabar
त्रियुगा नगरपालिकाको १६ नं. वडाले राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत लाईन गाउँमा विस्तार गरेसंगै धौरी गाउँमा विजुली बलेको छ । उज्यालाे पर्व तीहारकाे अवसर पारेर गाउँमा बत्ति बालिएकाे हाे । पालिकाकै सबैभन्दा विकट वडाको रुपमा रहेको १६ नं.को पनि विकट सो गाउँमा लक्ष्मि पुजाकै दिन हिजाे विजुली बलेपछि गाउँलेहरु खुसी भएका छन् । नेकपा उदयपुरका सचिवालय सदस्य एवम् एन्फा प्रवक्ता किरण राईको प्रमुख आतिथ्य तथा नेकपा उदयपुर सचिवालय सदस्य भागवत राउतको विशिष्ट आतिथ्यमा विजुली बत्तिको भब्य उद्घाटन भयो । उहाँहरुले बत्तिको स्वीच थिचेर विजुली बालेपछि गाउँबासीको मुहारमा खुसी छाएको थियो । बर्षौदेखिको धौरीबासीको विजुली बाल्ने सपना पुरा भएको छ । नजिकै सुकौरामा बत्ति बलेको टुलुटुलु हेरेर मात्र बर्षौ बस्न बाध्य धौरीबासीले अव घरमै उज्लायो विजुली पाएका छन् ।
“हिजोको विकट धौरी आज उज्यालौ धौरी बन्यो” वडाध्यक्ष मानबहादुर राईले भन्नुभयो । अव विजुलीका कारण गाउँलेहरु उज्लायोमा बस्न पाएका छन् । रेडियो सुन्न, टिभि हेर्न, विद्युतीय सामग्रीहरु प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ । वालवालिकालाई पढ्न सजिलो भएको छ । गाउँमा मिल, उद्योग, कलकारखाना खोल्नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
अव धौरीमा खानेपानीको समस्या हल गर्न पनि वडा लागी परेको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । धौरीमा मुख्य तीनवटा समस्याहरु सडक, विजुली र खानेपानी मध्ये, सडक र विजुली पुगेपछि खानेपानीको समस्या हल बाँकी रहेको वहाँले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिले चुनावमा धौरीबासीसंग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्दै गएको भन्दै खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राईले नेकपाको सरकारले जनतासंग चुनाबमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र जनताको हरेक सुखदुखसंग संगसंगै रहने प्रण लिएको बताउनुभयो । सोही अनुसार ब्यवहार पनि देखाइरहेको बताउनुभयो । खासगरी ग्रामिण भेगका जनताहरु भौगोलिक, आर्थिक जस्ता समस्या र अभावले झेलिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुको घाउँमा मलम लाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । १६ नम्बर वडाले गरेको यो काम एउटा उदाहरण भएको बताउनुभयो । नेकपाले सदैब जनताको दुःखलाई नजिकबाट बुभ्mने र समाधानमा अग्रसरता देखाउने उहाँले बताउनुभयो । धौरी जस्ता विकट गाउँहरुका बासिन्दाहरुलाई पनि नगरपालिकाभित्र छौं भन्ने आभाष दिलाउन आफु र आप्mनो पार्टी सदैब लाग्ने प्रतिबद्धता उहाँले ब्यक्त गर्नुभयो ।
विशिष्ट अतिथि राउतले देशको तीनै तहको सरकार नेकपाको नेतृत्वमा रहेकाले जनताले विकासको अनुभुती गर्न पाएको बताउनुभयो । खासगरी स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनताको समस्याहरु हल गर्न नेकपा सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले मलेवाभिरमा रहेको पानीको स्रोतलाई अव विजुलीको प्रयोग गरेर गाउँसम्म ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । अहिले विजुली बल्दा धौरी आएको र अर्को पटक आउदा खानेपानीको धारा खोल्ने गरी आउने बताउनुभयो । त्यसको लागि आफु र आप्mनो पार्टीको तर्फबाट लागीपर्ने बताउनुभयो । विजुलीका कारण चट्याङ गाउँमा पर्छ भन्ने अन्धविश्वास समय क्रमसंगै हटेर जाने बताउनुभयो । उहाँले गाउँलेहरुलाई चट्याङ पर्ने समस्या नपार्ने प्रस्ट्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका पूर्व अध्यक्ष महेश्वर चामलिङले गाउँमा विजुली बलेको समाचार लेख्न पाएकोमा खुसी ब्यक्त गर्नुभयो । ग्रामिण जनताको यस्ता खुसीको खबर लेख्न पाउदा पत्रकारहरुलाई खुसी लाग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षक, टोलविकास संस्था, सामुदायिक वन समुह, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधिहरुले पनि शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए ।